Qof walba wuxuu nolosha ku lee-yahay sad u gaar ah. Cimrigu waa midka ugu milgaha culus oo lagu dheefsado nolosha. Calafka cimriga, xumaantiisa iyo samaantiisa waxaa qofka la wadaaga dadka la faca ah ee xilli-dhalashadooda ay isku dhowdahay. Waxaa kaloo ku weheliya faco ka yar-yar iyo faco ka waaweyn. In-kasta oo ay yihiin saddex fac oo isa-soo gaaraya, misana wadar u-jooggoodu si siman uma muddeysna. Faca dhallinyarada ah oo iyagu leh xilliga, ayaa waxay yihiin tamarta jaheysa bulshada. Faca ka yar-yar waxay yihiin magan u dabran wixii sooryo-gal ah oo ay helaan. Faca ka waaweyn ayaa iyaguna waxay matalayaan bakhaaro ay ku keydsan yihiin khibrad iyo waayo-aragnimo laga doonayo inteeda wanaagsan in ay u gudbiyaan faca dhallinyarada ah.
Nolosha waxay aadamiga bartey, aabihii aanan caruurtiisa u diyaarin in ay isaga ka wanaagsanaadaan, caruurtaasi mooryaan ayay noqonayaan oo iyaga ayaa silcinaya waalidkood. Waxaa lamid ah macallinkii aanan ardeydiisa u diyaarin in ay ka wanaagsanaadaan, ardeydaasi mooryaan ayay noqonayaan oo iyaga ayaa silcinaya kuwii wax barey. Sidaas oo kale waxaa ah faca waaweyn ee dhallinyaradooda aanan diyaarin u diyaarin in ay ka wanaagsanaadaan, facaasi dhallinyarada ah mooryaan ayay noqonayaan oo iyaga ayaa silcinaya facii ka waaweynaa.
Facaadda dhallinyarada ah, waa xilli qofka aadamiga ahi uu ku sugan yahay heerkii noloshiisa ay ugu wacnaansho badan-tahay. Waa xilliga uu qofku ugu xooggan yahay, ugu fir-fircoon yahay, ugu waxbarasho badan yahay uguna wax-qabad badan yahay. Waa xilli uu yahay gaashaan-qaad oo noloshu ay u kala-guureyso. Wuxuu ka soo gudbayaa xaalad caruurnimo oo uusan lahayn faham nolosha uu ku qiimeeyo. Wuxuu u tallaabayaa muqdarnimo garaad uu ku fahmo qiimeynta nolosha. Xilligaas kala-guurka ah, waxaa lagu xisaabiyaa xilliyada qofka soo mara xilliga ugu milgaha culus. Sababtu waxay tahay waa xilliga uu qofku si buuxda u hana-qaadayo oo ay ku bilaabaneyso dareenka ah in uu nolosha wax ku lee-yahay. Wuxuu bilaabayaa in uu dibadda soo dhigo qaabkii uu ku midabeyn lahaa khibradihii yaraa iyo aqoontii uu nolosha ku kasbadey, isla-markaas uu raadinayo aqoon dheeri ah. Wuxuu markaas adeegsanayaa awoodda caqliga ee curdanka ah iyo awoodda jirka ee xooggan, isaga oo marka hore baadi-goobaya kororsi waaya-aragnimo, marka xigana fayiigsi iyo ficil wada-jira ku tiigsanaya timaaddada.
Isla-xilligaas qofka dhallinyarada ah wuxuu bilaabayaa guda-galka dhisid qoys si uu uga qeyb-qaato tallaalka abuurkii uu kaga qeyb-geli lahaa nolosha bulshadiisa. Xilligaas hore, gudaha jirka qofka dhallinyarada ah waxaa ku dhacaya is-beddello xooggan. Waxay ka muuqanayaan naqshadda xubnaha iyo qaabka uu jirku u shaqeynayo (physical & physiological changes). Meesha u horeysa ee laga dheehanayo waa kala duwanaanshaha jinsiga lab iyo dheddig, kuwaas oo maraya laba marxaladood (primary & secondry). Dhecaanada (hormons) jirka gudihiisa ku qubanaya ee ku howlan is-beddelka la xiriira koritaanka xubnihiisa, waxay raad ku yeelanayaan qaab-dhaqanka iyo fekerka qofka dhallinta-yar. Dhallinyaradu waxay la gaar yihiin, faca ka waaweyn in ay ka tira badan yihiin, ka xoog weyn yihiin, kana dadaal badan yihiin. Waxaa intaas u dheer, baxsadka uu sabab u yahay ka carar ciilkii caruurnimo oo ay tagtadooda ka soo mareen. Iyo u fara-baxsiga timaaddada oo ay sabab u tahay dheygag leh fayiigsi xooggan iyo dheehasho damac weyn oo xiiso iyo xaraka miiran ah si ay joogtadooda uga yeelaan sahaydii timaaddadadooda.
Nolosha qiimaheeda waa xilliga dhallinyarada la yahay. Macna weyn ma ayan lahaateen haddii uusan xilligaas jireen. Waa xilli ayan riyada noloshu ka dhamaan, noloshuna xushmad dheeri ah ayay u heysaa qofka dhallinyarada ah. Waa ay soo dhoweysaa hadba inta uu isaguna soo dhoweeyo nolosha. Taasi waxay ku abuurtaa dhallinyarada, iyaga oo dhiirran in ay mar-walba doonaan guul. Meel-kasta waa ay u maraan iyaga oo u huraya qaali iyo raqiis. Guushuna waxay saaxiib la tahay oo ay soo dhoweysaa kuwa iyada raadinaya. Marka ay dhallinyaradu caafimaad qabaan, waa ay u hunguri dheer-yihiin nolosha. Hal-abuurka wanaagsan iyo hanqal-taagga miisaaman ee dhallinyarada waxaa ka faa´iideysta bulshada. Awooddaas ayaa bulshadu waxay kaga gudubtaa nolol harraad, halamash iyo hagardaamo badan oo ay hamuunyona u dheer-tahay. Waxay u gudbaan nolol leh hiraal wacan iyo hillaac hal-dhisyo lagu doogsado. Ooraah ayaa jirta:
” Noloshu waxay isu kaa tusineysaa sida aad adigu u dooneyso iney kuugu muuqato ee isu kaa tusi-meyso sida ay iyada u dooneyso in ay kuugu muuqato ”.
Qosolka iyo farxaddu waa ay ku badan tahay nolosha dhallinyarada, maxaa yeeley nolosha ayaa waxay ka doonayaan in ay ka helaan qosol iyo farxad. Sidaa darteed, iyaga waxaa u muuqata fursadaha nolosha. Haddii ay gartaan in fursadahaasi ay iyagu lee-yihiin, markaas waxay ku dadaalaan sidii ay u laaci lahaayeen. Haddii ay dhallinyaradu yihiin kuwo ka badbaada-qaba aragtida cunsuriyadda ah (fir-sooc) iyo midda curyaannimada ah (saama-jiid) waxay jecleystaan in ay magac hagaagsan sameystaan, intii magac loo sameyn lahaa ama ay dhaxli lahaayeen magac fac ka horeeyey ay ka tageen. Faca dhallinyarada ah waxaa mar-walba ku tallaalan doonis in ay dhanka wanaagsan u midab-beddelaan nolosha facii ka horeeyey, intii ay dhex-fadhiyi lahaayeen nolol ah soo-arag ku-joog. Waxay jecel yihiin in ay fir-fircooni muujiyaan, intii ay noqon lahaayeen xan iyo xin u-joog. Dhallinta caafimaadka qabta waxaa ku yar tilmaamaha guracan oo bulshada ka dila han-tiigsiga nolosha, kuwaas oo damaca khariban iyo fuleynimada ay ugu horeeyaan.
Xasuusta dhallinyaradu waa ka maran-tahay dhacdooyinkii lurka badnaa ee xilligii caruurnimada. Indhahooduna maahan kuwo qabanaya xaaladda lahanka badan ee xilliga waayeelnimada. Noloshooda waxaa u badan dareen la xiriira timaaddada, kaas oo ay uga dhex-muuqdaan nolol ku asqeysan nayaayiro iyo naallood. Maxaa yeeley waa faca ay noloshu u qosleyso ayna soo dhoweeneyso. Iyagu waxay lee-yihiin awood ay ku gaaraan har-gal nololeed iyo qurux walba oo ay jantaan. Shidaalka xooggan oo korkoodu uu sahayda u wato wuxuu sabab u yahay, in dhallinyaradu ay yihiin kuwa libta u keena bulshadooda. Aamusnaantooda waxaa ku naaxa gafanayaal aanan arxan lahayn ee bulshada gaarsiiya nabarro xanuun badan. Guuxa dhallinyaradu waxaa ku nasta maatada ku liidata nolosha. Dhallinyaradu waa matoorkii nolosha iyo tamartii dhismaha bulshada. Xooggoodu wuxuu lamid yahay tamarta korontada ee gidaarrada qolalka lagu diyaariyo. Tamartaas ayaa waxay tahay mid ka shaqeysiisa frijiteer (qaboojiye) iyo kaawiyad (kululeyso) hadba kii la-doono. Waxay ka shaqeysiisaa idaacad (maqal-tebiye) iyo telefishan (muuqaal-tebiye) hadba kii la-doono. Waxay ka shaqeysiisaa taleefan (hadal-tebiye) iyo kombyuter (maqal- iyo muuqaal-tebiye) hadba kii la-doono. Waxay ka shaqeysiisaa marwaxad (bankad) iyo saacad (gooreyso) hadba kii la-doono. Waxaa jirta ooraah oraneysa:
” Kala-garo in noloshu ay tahay qaddar jaan-go´an iyo dhacdooyin leh sababo. Qaddartana aamin, dhacdooyinkana wax iska-weydii ”
Tamarta korontada ah, awood mid ah ayay ku sahleysaa adeegsiga dhamaan agabkaas kala duwan in si kala duwan, oo nafac kala duwan leh loogu intifaacsado dhacdooyin kala duwan. Dad sababaha dhacdooyinka is-weydiiyey ayaa hal-abuurey. Xoogga dhallinyarada waa ceynkaas oo kale. Waa tamar bulshadu lee-dahay oo meel u yaal. Marka qaddarta la rumeeyo, sababaha dhacdooyinkana leys-weydiiyo, xoogga dhallinyarada, bulshadu waxay uga faa´iideysan kartaa qaab walba oo maslaxaddeeda ah.
Bulshadu markii ay aragti haboon curiso, dhallinyaradu waa xoogga waaqica u beddela. Markii ay bulshadu dagaal curiso, dhallinyaradu waa kuwa gulufka hor-kaca. Markii ay bulshadu nabad curiso, dhallinyaradu waa kuwa hubka dhiga. Markii ay bulshadu hiraal curiso, dhallinyaradu waa kuwa suragal ka dhiga. Waxaa xeerarka nolosha kamid ah in xilli qof lee-yahay uusan gooreysan-karin qof kale. Sidaas si lamid ah ayaa facna uusan u bililiqeysan karin xilli uu lee-yahay fac kale. Haddeyse dhacdo waxaa u sabab ah nabarro ay la curyaameen ee weheliya faca la bililiqeystey.
Waxaa hubaal ah in faca howl-gabka ah ay lamid yihiin qorrax ka soo baxdey cirifyada adduunka, xilli qaboobe ah iyada oo dhulku uu baraf ceegaago. Qorraxdaasi waa suuragal in laga helo kaahii maalinnimo. Laakiin waxaan laga helynin tamartii iyo kuleylkii socod-siin lahaa nolosha dhulka oogadiisa ah. Dhallinyaradu waa rajo ku-nool iyo timaaddo-sugayaal ah. Waayeelkuse waa xusuus iyo tagto ku-nool, rajaduna ka madowdahay. Haddaba bulshadii ay dhallinyaradeedu ku wareeraan aragti ma-dhaleys ah ee aan waaqic ahayn, wakhtigaa ka dayacma. Bulshadii dhallinyaradeedu ay guul-wadayaal u noqdaan kuwo daneystayaal ah, waa ay halaagsantaa. Bulshadii dhallinyaradeedu ay is kooxeeyaan, dabadeedna koox waliba ay dhankeeda ka raadiso in ay kooxda kale ka guuleysato, waxaa ka baaba´a awooddii ay kula tartami lahayd dhiggooda. Xilligii dhallinyarada Soomaaliyeed ay caafimaadka qabeen waxaa ereyadoodii kamid ahaa:
Aboorkuba alleylkuu dhisaa aqallo waaweyne
Markuu ururey daartuu ebyaa la ashqaraaraaye
Ilkuhuba wada-jirkey hilbaha adag ku gooyaane
Haddii iniba meel taagan tahay adhax ma fiinteene
Itifaaq la´aan laguma helo lib iyo iimaane
Indhahaad isku arkeysaan cadaawaha isaga eega
Ha ordina´e xaajada sidii aydinta u raaca
Ha ekaanina´e talo ninkii odhan karow dhiibta
Abtirsiimo reer hebel iyo odey ku faan daaya
Indho-fura hurdada waa waxaad ku ibtilowdeene (Xaaji Aadan Af-qallooc)
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 28, 2013